Somali (Af-Soomaali) | Why the Sun and Moon Live in the Sky(Maxay Quraxda iyo Bisha ugu noolyihiin Cirka) | WorldStories
Maxay Quraxda iyo Bisha ugu noolyihiin Cirka
Sannooyin badan ka hor, quraxda iyo biyaha waxay ahaayeen saaxibo wanaagsan, iyo waxay labadoodaba si wadajir ah ugu noolyihiin dhulka. Quraxda inta badan waxay isticmaaleen inay soo booqdeen biyaha, laakin biyaha marnaba ma soo laaban booqashooyinka.
Ugu dambeyntii quraxda ayaa weydiisay biyaha sababta uusan marnaba u soo booqan. Biyaha waxay ku jawaabeen in guriga quraxda uusan si weyn ugu filneyn, iyo in haddii uu la imaado dhammaan dadkiisa, uu ka dhaqaajinayo quraxda gurigiisa.
Biyaha ayaa kadib yiri, "Haddii aad rabtid inaan aniga ku soo booqdo, waa inaad ii dhistaa guri weyn. Laakin waan kaaga digay inuu ahaadaa mid aad u balaaran, sida aan leeyahay qaraabo badan iyo saaxibo oo waxaan qaadanaa qolal badan".
Quraxda waxay balan qaaday inat dhisto guri weyn iyo durbadiiba markaas kadib wuxuu ku laabtay guriga ee xaaskiisa, quraxda, ee ku salaamayo isaga dhoola cadeyn weyn.
Quraxda waxay u sheegtay bisha waxa uu ka balan qaaday biyaha, iyo maalinta xigtay waxay bilaabeen inay dhisaan guri weyn ee lagu madadaaliyo biyaha iyo dhammaan qoyskiisa iyo saaxibadiisa. Markii la dhameystiray, quraxda waxay weydiisay biyaha inay imaadaan oo ay isaga soo booqdaan.
Markii biyaha ay imaadeen, wuxuu u yeeray quraxda oo weydiiyay isaga haddii ay badbaado u ahaaneyso dhammaan qoyskiisa iyo saaxibadiisa inay soo galaan, iyo quraxda wuxuu ku jawaabay, "Haa, kuligiin waad soo gali kartaan."
Biyaha waxay bilaabeen inay ku soo qulqulaan, waxaa xigay kaluunka iyo dhammaan xayawaanada kale ee badda.
Markiiba, biyaha waxay ka joogeen jilbaha guriga, marka biyaha waxay weydiiyeen quraxda haddii ay weli badbaado aheyd, iyo quraxda waxay markale dhaheen, "Haa fadlan imaw gurigeyga," marka biyaha iyo dhammaan qoyskiisa waxay sii wadeen inay soo galaan.
Markii biyaha ay ahaayeen heerka madaxa nin, biyaha waxay ku dhaheen quraxda, "Weli ma rabtaa in dad badan soo galaan?"
Isagoon wax wanaagsan ogeen, quraxda iyo bisha waxay labadoodaba dhaheen, "Haa, inta badan ee aad faraxsantihiin".
Marka kuwa badan oo dadka biyaha ayaa soo galay, illaa quraxda iyo bisha ay aheyd inay fariistaan dusha saqafka. Markii biyaha ku soo qulquleen dusha kore ee saqafka, quraxda iyo bisha waxaa lagu qasbay inay cirka kore aadaan.
... iyo waxay meeshaas joogeen tan iyo markaas.